Sidee u shaqeeyaa Red Emperor CBD & Delta 8 THC Products
Cannabidiol (CBD) waa cannabinoid dabiici ah oo ka mid ah qaybaha ugu badan ee hemp. CBD waa badbaado in la cuno oo ma aha mid nafsiyan-darro ah, muddo dheerna lagu qiimeeyay waxtarkeeda caafimaad ee faa'iidada leh iyada oo aan la helin waxyeellooyinka daawooyinka dhakhtarku qoro.
Geedi-socodka soo-saaridda CBD ee Red Emperor CBD waa kiimiko-la'aan waxayna adeegsataa kaarboon laba-oksijiin cadaadis leh (CO2) si ay uga soo saarto phytochemicals-ka la rabo (sida CBD) geedka hemp. Nidaamkeenu wuxuu ka madax bannaan yahay walxaha kiimikada adag ee inta badan loo isticmaalo soo saaridda CBD saliidda. Soo-saaridda CO2 waa mid bey'adda u fiican oo aan sun ahayn, oo loo arko inay tahay habka soo-saaridda dhirta ugu nabdoon adduunka.
Red Emperor CBD waxay la shaqaysaa beeraha hemp ee FDA-shahaado ku leedahay Colorado, California, iyo North Carolina. Waxaan siineynaa beeraleyda CBD helen hemp leh hiddo-wadayaal u gaar ah si loo hubiyo inay soo saaraan badeecadaha hemp-ka-fasalka ah. Ka dib iyo ka hor intaan la goosan dhirtayada hemp, beeraleydeena waxay tijaabiyaan agabka dhirta si loo hubiyo inaysan ku jirin caaryaal, caariyaysi, ama biro culus.
Ka dib markii hawsha tijaabada la dhammeeyo, beeraleydeena ayaa markab u dira oo ka baaraandegta walxaha dhirta hodanka ah ee phytocannabinoid mid ka mid ah xarumaha soo saarista shatiga leh ee markaa badeecadaha u roga badeecadahayaga CBD ee heer caalami ah.
Alaabooyinkayagii dhammaaday waxaa la soo saaray iyadoo la adeegsanayo hababka ISO-shahaado haysta ama GMP. Noocyadayada gaarka ah ee lahaanshaha leh ee CBD sare iyo THC marijuana hemp waxay soo saartaa cannabinoids iyo terpenes dabiici ahaan waxtar badan marka loo eego nooc kasta oo la mid ah dhul -beereedka ama hemp oo laga helo hemp warshadaha Shiinaha ama Yurub.
In kasta oo shirkado kale ay ahaayeen noocyada cannabis-taranka si ay u soo saaraan THC badan, kooxdayada hidde-wadayaashu waxay abuureen noocyo marijuana si ay u soo saaraan LESS THC si ay u soo saaraan noocyo badan oo cannabinoid ah oo aan nafsiyan ahayn sida CBD, CBG, CBN, Delta 8 THC, iyo CBC
All of our products are engineered to feature a full spectrum of cannabinoids and terpenes, and every Red Emperor CBD & Delta 8 THC product is verified by an independent third-party lab to ensure safe, consistent, and high-potency products that allow our customers to live happier healthier lives.
Raadi Blogyadayadii ugu dambeeyay
Blogsyadeena Ugu Dambeysa
Delta 8 THC & Lumid Miisaan
Warbixinta Sirdoonka BISHA ee Wakiilka Freak Nasty 8-30-2021
Warbixinta Sirdoonka BISHA ee Wakiilka Jilicsan 7-25-2021
Warbixinta Sirdoonka Toddobaadlaha ah ee Wakhtiga Xun 6-27-2021
Texas waxay sharciyeyneysaa Delta 8 THC Products
Cusub: Barashada Sheegashooyinka Qiyaasaha Weyn ee CBD Waxay Ka Caawisaa Jiirka inay yareeyaan Qaadashada Meth